07/02/2018 - Page 2 sur 5 -
Fanaovana “bulletin de naissance” : Olana avy amin’ny kaominina ny tsy fahampiana
07/02/2018 admintriatra 0
Ao anatin’ny fanomanana ny fanadinam-panjakana tanteraka ireo mpianatra manerana ny Nosy amin’izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin’ny antontan-taratasy takiana amin’izany ny “bulletin de naissance”. Araka ny vaovao voaray, dia maherin’ny 500 isan’andro amin’izao fotoana izao …Tohiny
Miandrivazo : Mpivady Italianina nilatsaham-potaka
Teratany vahiny mpivady izay mizaka ny zom-pirenena italianina no nilatsaham-potaka indray ny alahady lasa teo. Tany Miandrivazo no nisehoan’ity tranga ity, izay niafara tamin’ny famoizan’ilay rangahy ny ainy mihitsy, raha toa ka tsy naninona kosa …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana teo Ambatolampy : Mpandeha roa namoy ny ainy
Olona roa, samy 39 taona no indray namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany Antsahafiraisana Ambatolampy ny alatsinainy lasa teo, tokony ho tamin’ny 04 ora hariva. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, dia nifanena …Tohiny
Mpianatra namono olona : Ahiana ho misy manafina
Andro vitsivitsy lasa izay no namoahan’ny teo anivon’ny kaomisaria ao Idanda Fianarantsoa , ny taratasy fampikarohana an’i Jao Marinjara Stéphan, saingy mbola tsy nahitana mangirana ny mahakasika azy hatramin’izao, na dia efa manao izay ho …Tohiny
« Logiciel »-ny HCC : Tsy misy mahalala afa-tsy Rajoelina!
Andry Rajoelina sy ny MAPAR irery ihany ve izany no mahalala sy mahafantatra ny “logiciel” ampiasain’ny HCC? Mipetraka tokoa ny fanontaniana amin’izao fotoana izao… Tsy misy kandidà mahafantatra izay « logiciel » ampiasain’ny HCC hamoahany izay voka-pifidianana ...Tohiny
Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE